विज्ञान प्रबिधि Archives - पब्लिक पाेष्ट
Category: विज्ञान प्रबिधि
August 4, 2019 August 4, 2019 EP EDITORLeaveaComment on फेसबुकले इन्स्टाग्राम र वाट्सएपको नाम परिवर्तन गर्दै
काठमाडौ । फेसबुकले सन् २०१२ मा इन्स्टाग्रामलाई खरिद गरेको थियो।फोटो र भिडियो सेयरका लागि अति लोकप्रिय बनेपछि फेसबुकले इन्स्टाग्रामलाई १ अर्ब अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो।तर मासिनहरु अझै पनि इन्स्टाग्राम फेसबुकको मातहतको एप्लिकेसन हो भनेर चिन्दैनन्। फेसबुकले अब इन्स्टा आफ्नो एप्स हो भनेर चिनाउन इन्स्टाग्रामको नाम परिवर्तन गर्दैछ। अमेरिकी संचारमाध्यमका अनुसार इन्स्टानको नाम ‘इन्स्टाग्राम फ्रम […]
काठमाडौ । दोस्रोपटक सत्तामा आएसँगै भारतमा मोदी सरकारले सोसल मिडिया कम्पनीहरूमाथि दबाव बढाउने योजनामा छ । प्रयोगकर्ताका डाटा लिक हुने घटनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक भएपश्चात् भारत सरकारले सोसल मिडिया कम्पनीहरुमाथि प्रयोगकर्ताका डाटाहरु देशभित्रै राख्न दबाव दिने भएको छ । यससम्बन्धमा भारत सरकारले आगामी महिना एउटा कानून ल्याउँदैछ । जसमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीका लागि आवश्यक परिवर्तन ल्याउने […]
घाम पूर्वबाट उदाउँछ, पश्चिममा अस्ताउँछ । चन्द्रमा पनि पूर्वबाटै उदाउँछ र पश्चिममा अस्ताउँछ । हेर्दा र सोच्दा यस्तो लाग्छ– पृथ्वी एउटा ठाउँमा अडेको छ, घाम र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्ने गर्छ । वास्तवमा यो सत्य होइन भन्ने कुरा अहिले सामान्य पढेलेखेको सबैलाई थाहा छ । सबैले जानेको, बुझेको र मानेको सत्य के हो भने, घामले पृथ्वीलाई […]
June 27, 2019 July 4, 2019 EP EDITORLeaveaComment on फेसबुकले ल्याउन लागेको डिजिटल मुद्राप्रति अमेरिकी सांसदको आपत्ति
वासिङ्टन । फेसबुकले आगामी वर्षमा डिजिटल मुद्रा लिब्रा उपयोगमा ल्याउने भनेको केही दिनमै विरोध पनि भएको छ । खासगरी अमेरिकी संसद अन्तर्गत फाइनान्सियल सर्भिसेस कमिटीले यस्तो मुद्राको विकास अहिले नगर्न सुझाव दिएको छ । कमिटी अध्यक्ष तथा सांसद म्याक्सिन वाटर्सले त्यस्तो मुद्राबारे अनुसन्धान नगरिकन डिजिटल मुद्रा विकासको काम रोक्न चेतावनी दिएकी छन् । अमेरिकी सांसद […]
विज्ञानका किताब पढेका बच्चा बच्चाहरुलाई थाहा छ– अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो जीव लाइका हो भन्ने कुरा । लाइका वास्तवमा, एउटा साधारण कुकुरको नाम हो । मस्कोको गल्ली गल्लीमा भौंतारिने कुकुर लाइकालाई तालीम दिएर सोभियत अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरुले प्रयोगको क्रममा अन्तरिक्षमा पठाएका थिए । त्यसले गर्दा उक्त साधारण कुकुरले असाधारण ख्याति र कीर्ति कमाउन पुग्यो । हुन त […]
एजेन्सी । स्मार्टफोन निर्माता चिनियाँ कम्पनी हुवावेमाथि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट प्रतिबन्ध लागेसँगै गुगलले पनि हुवावेसँगको सम्बन्धविच्छेद गरेको छ र हुवावेको एन्ड्रोइड लाइसेन्स गत महिना रद्द गरिदिएको छ । यसो हुँदा अब हुवावेले आफ्ना स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ्ग सिस्टम राख्न पाउने छैन । अमेरिकी वाणिज्य विभागले हुवावेलाई एन्टिटी सूचीमा राख्दै अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरापूर्ण रहेका कम्पनीको सूचीमा हुवावेलाई […]
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा छिटो उड्ने नागरिक बिमान निर्माणको काम सुरु भएको छ । यो बिमान निर्माणका लागि निकै ठूलो सहयोग राशि समेत प्राप्त भएको एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । यो प्रोजेक्ट जब पूरा हुन्छ र भनिएजस्तो बिमान तयार हुनेछ, तब यो बिमानले केबल ६ घण्टामा अमेरिकाको लस एन्जेल्सबाट अस्ट्रेलियाको सिड्नी पुर्याउनेछ । बुम सुपुरसानिक नामको […]
March 16, 2019 EP EDITORLeaveaComment on फेसबुक–ट्वीटरले तपाईंबारे के–के थाहा पाउँछन् ?
काठमाडौ‌ं-इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, सर्फिङ साइट तथा एप्स चलाउँदा तपाईंले थाहै नपाई आफूबारेका सूचना दिनुभएको हुन्छ। के कहिल्यै सोच्नुभएको छ, तपाईंबारे ठूला डिजिटल प्राविधिक कम्पनीले केके थाहा पाइरहेका हुन्छन् ? यी कम्पनीले तपाईंका निम्न सूचना जानिराखेका हुन्छन्ः फेसबुकः नाम, लिंग, जन्ममिति, फोन नम्बर, इमेल ठेगाना, स्थान, सम्बन्धको स्थिति (विवाहित, अविवाहित), काम, आय, शिक्षा, जाती, […]
पछिल्ला दिनहरुमा स्मार्टफोन कम्पनीहरुले बढीभन्दा बढी क्षमतायुक्त क्यामरा भएका स्मार्टफोन ल्याउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । शाओमीको रेडमी नोट सेभेन प्रोको ४८ मेगापिक्सेल क्यामरा होस् वा नोकिया नाइन प्योरभ्यूको पाँचवटा क्यामरा सेटअप होस्, स्मार्टफोन फोटोग्राफीमा नयाँ आयाम थपिएको छ । स्मार्टफोन क्यामराको यो प्रगति रोकिनेवाला छैन । अब स्मार्टफोनमा छिटै नै १ सय ९२ मेगापिक्सेलको क्यामराबाट […]
गोदावरी । नेपालले आगामी वैशाखमा आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको शोध गरिरहेका दुईजना नेपाली इञ्जिनियरको सहयोगमा राष्ट्रले पहिलोपटक आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागेको हो । ‘बड् थ्री’ नामक भू–उपग्रह निर्माण तथा प्रक्षेपण गर्न सरकारले ती विद्यार्थीलाई रु दुई करोड उपलब्ध गराएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट)का प्र्रविधि […]